Soo bandhigida natiijooyinka Apple ee Q4 2016. Ma la socon doonaan qalab cusub? | Waxaan ka socdaa mac
Apple ayaa ku shaacisay boggeeda xiriirka maalgashadayaasha, taariikhda la soo saari doono natiijooyinka maaliyadeed ee Q4 2016, oo noqon doonta bisha soo socota ee Oktoobar 27. Waa rubacii ugu dambeeyay ee sanadka sidaa darteedna, majiraan farqi udhaxeeya soo kabashada qaawan ee iibka ama macaashka sidaa darteedna waa inay kasoo kabtaan wadadii tirooyinka wanaagsan ee labixiyay sanadihii lasoo dhaafay, gaar ahaan sanad lagu tilmaamay gaabiska iibka. Luca Maestri iyo Tim Cook iyaga ayaa hogaamin doona shirka jaraa’id.
Natiijooyinka la helay Q4 2016, saamaynta qaar ka mid ah iibka iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus waa in la arkaa. Waa waqtigii ku habboonaa ee lagu ogaan lahaa tirooyinka iibka rasmiga ah ee ugu horreeya, maxaa yeelay illaa iyo hadda waxaan kaliya ka haynaa warar xan ah oo ku saabsan kororka wax soo saarka intii la filayay.
Haddii aan ku dheganaano tirooyinka rubucii ugu dambeeyay ee Q3 2016, shirkaddu waxay soo bandhigtay iibkii saddexdii biloodba mar oo ah 42.400 bilyan oo doolar, iyo sidoo kale faa iidada saafiga ah oo gaadhaysa ilaa 7.800 bilyan oo doolar, taas oo muujinaysa faa iido dhankiiba 1,42. Dhinaca kale, kuwa kor ku xusan, tirooyinkan aadka u wanaagsan ee shirkad kasta, waxay muujinayaan hoos u dhac 15%, oo soo bandhigaya isla rubucii sanadkii la soo dhaafay (3Q 2105) 49.600 milyan oo doolar, iyo sidoo kale faa'iido saafiya oo gaadhaysa 10.700 milyan oo doollar .
Laakiin maxaa ka muhiimsan: Dhibicdan looma nisbeyn karo shey gaar ah, laakiin waxay sababtay gaabis xagga iibka ah in gorfeeyayaashu ay u aaneeyeen maqnaanshaha sheeko-soo-saarkooda.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, Galabta waxaan helnay xanta sheeko muhiim u ah Oktoobar 24-keeda. Soo bandhigiddan Apple waxay xoogaa la jaanqaadaysaa xaqiiqda ah inay doonayso inay dhiirrigeliso soo bandhigidda natiijooyinka iyadoo laga filayo wax soo saarka geeska ah ee ka dhigi doonta maal-gashadeeyaasheeda "naaxinta" tirada faa iidada.
Ugu dambeyntiina, tani waxay u tarjumaysaa alaabooyin cusub. in aan hubaashii la kulmi doonno dhammaadka Oktoobar oo aan ka dhigeyno "qoyska Apple" nasiib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Soo bandhigida natiijooyinka Apple ee Q4 2016. Ma la socon doonaan qalab cusub?